Fiatrehana ny valanaretina :: Nanomana vola fiandry 1 000 miliara ariary ny fanjakana • AoRaha
Niteraka adihevitra lehibe, tetsy anivon’ny Antenimierandoholona, nandritra ny fihaonan’ireo loholona tamin’ny minisitry ny Vola sy ny toekarena, Randriamandranto Richard, afak’omaly, ny sora-bola 1 000 miliara ariary hita ao anatin’ny tolo-dalàna mikasika ny Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR 2020). Nilaza ho tsy mahafantatra ny antony hilan’ ny fanjakana an’io vola io ireo mpikambana etsy Anosikely, ka nangataka fanazavana tamin’ ny minisitra tompon’andraikitra ry zareo.
Fantatra, taorian’ny fifampiresahan’ny roa tonta, fa tetibola natokan’ny governemanta hiomanana amin’izay loza tampoka mety hiseho, indrindra amin’ izao fiatrehantsika ny ady amin’ny valanaretina izao, io sora-bola hita ao anatin’ny Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020 io.
“Tsy haintsika izay zavatra hitranga, rahampitso, ka mila miomana manoloana izao ady atao amin’ny Covid-19 izao isika”, hoy ny minisitra Randriamandranto Richard. Novakian’ity farany bantsilana ihany koa fa: “hanamafisana ny ady amin’ny valanaretina ireo vola nomen’ny mpamatsy vola, fa tsy natao hanampiana an’ireo sehatra tsy miankina”. “Tsy ampy amin’ izany ny hoenti-manana eto am-pelatanantsika”, hoy izy.
Tsy nikitika an’io andininy momba ny tetibola fiomanana amin’ny tampoka io ireo loholona rehefa nahazo fanazavana avy amin’itsy solontenan’ny governemanta itsy. Miankina amin’ireo solombavambahoaka sisa, araka izany, ny fankatoavana an’ity tolo-dalàna momba ny Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020 ity.
Fanalefahan-tsazin’ny filoha :: Gadra telo arivo havoaka ny fonja manerana ny Nosy
Fisorohana valanaretina :: Hametraka paikady vaovao eto an-drenivohitra ny Tafika